Microsoft Office Noocyadii Hore Hada Waa Laheli Karaa | Androidsis
Microsoft waxay ku degtay Play Store oo leh barnaamijyada otomaatiga ee xafiiska ugu caansan sida Microsoft Word, Microsoft Excel iyo Microsoft PowerPoint. Dhammaan codsiyada wanaagsan ee u yimaada kiniiniyada Android si ay toos ugula tartamaan kuwa kale sida kuwa Google.
Markii hore, sida kaliya ee lagu heli karo barnaamijyadan loogu talagalay kiniiniyada waxay ahayd kaqeybgalka barnaamijka beta iyada oo loo marayo kooxda Google+ kii hore ee barnaamijyadan. Marka imaatinka barnaamijyadan Play Store waa war weyn u ah dhammaan isticmaaleyaasha leh aaladda noocaan ah isticmaali kartaa dhammaan astaamaheeda. Waa inaan xasuusnaano inaan wajaheyno marxalad horumarineed sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay leeyihiin waxoogaa cillad ah kuwa kale.
1 Gooni gooni ah laakiin ka awood badan
2 Imaansho la filayo
Gooni gooni ah laakiin ka awood badan
Kuwani 3 barnaamijyadooda cusub ayaa si gooni gooni ah u yimaada, laakiin mahadsanid tan waxay leeyihiin astaamo ka badan kuwa ay ku jiraan Office Mobile Software taasi waa la heli karay in mudo ah. Sidii aan kor ku soo sheegay, 3-daan barnaamij waxay ku xiran yihiin isbadal badan iyo ciladaha cilladaha, maaddaama aan dhahno hadda waxay ku jiraan marxaladda beta ee dadweynaha si Microsoft ay u sixi karto cilladaha badan oo ay u simi karto dhinacyada ba'an ee 3 barnaamij oo hubaal noqon doona inay noqon doonaan u noqo helitaan weyn isticmaaleyaal badan.
Shuruudda keliya ee ay tahay in kaniinigaagu uu dhaafo ayaa ah waxaad u baahan tahay inaad haysato Android 4.4 KitKat ama ka sareeya si ay u awoodaan inay ku rakibaan, marka laga reebo xaqiiqda ah inay leeyihiin cilad ama mid kale oo keenaya helitaanka dhammaan khibrada isticmaale ee la filayo.
Imaansho la filayo
Muuqaalka horudhaca PowerPoint, Word iyo Excel waa war aad u wanaagsan oo aad awoodid ka faa'iideyso meesha ugu weyn ee shaashadda kiniiniga ah inaad awood u yeelato inaad tafatirto dhamaan noocyada dukumiintiyada sidoo kalena aad abuurto. Haddii sabab kasta ha noqotee aadan helin furaha saxda ah si aad u hesho barnaamijyo beddeli kara kuwa Google, kuwan 3 hubaal farxad ayey kaaga tagi doonaan. Qodobka kale ee wanaagsan ee imaatinka kuwan hore ayaa ah tayada ay hadda siiso Play Store iyo tartanka u dhexeeya Google iyo Microsoft ee ah qalabaynta xafiiska ee ku shaqeeya Android. Wax aan dhammaanteen ka wada faa'iideysan doonno.
Erey: Qor, wax ka beddel oo wadaag dokumentiyada
Excel: Arag, wax ka beddel, oo samee xaashiyo
PowerPoint: Iskuduwaha iyo Bandhigyada
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Noocyadii hore ee barnaamijyada Microsoft Office ee loogu talagalay kiniiniyada Android horeyba ugu jiray Play Store
Android nidaamka mobilada hawlgalka heer sare ee Spain